musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Kufamba Kupfuura Guta rangu reNew York, Manhattan Zip Code
nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Health News • Hospitality Industry • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • USA Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Ini ndinogona kuchiva kabhodhi rakazadzwa nePrada neLV, asi chandiri KUMASHURE mukana wekufamba zvakachengeteka kunze kweZip Code yangu.
Pandinoteerera kuMSNBC, FOX neCNN, ndinonyeverwa nezvezvakasiyana zveCOVID, kudiwa kuri kubuda kwekusimudzira maputi, huwandu hwevanhu vari kurwara nerufu rwakahwanda pamusoro pehusiku.
Kwemakore maviri, ini ndakatorwa mune yangu imba, ndichitya kupinda muguta ndakafukidzwa zvizere, ndichidzivirira kusangana nevakuru, vana, uye vanozvidzivirira.
Ini ndinochenjerera kuregedza imbwa nedzimwe mhuka dzinovaraidza, ndichitadzisa kudyidzana kwangu kune wangu wepanyama murapi, wezvemitambo murairidzi, musupamaketi cashier, uye kumberi tafura yekugamuchira panzvimbo yangu yekurovedza.
Iyi HAPASI NZIRA yekurarama kupona COVID!
Nongedza chigunwe | Ndiani ane mhosva?
Kune zvakawanda zvekupa mhosva - kutanga nemusoro we World Health Organization (WHO) uyo ainyara kwazvo kukurumidza kuziva denda paakachiona.
Munyori Mukuru weWHO anoteverwa zvakanyanya kana zvasvika pakupihwa mhosva nevatungamiriri vakuru vanowana mamirioni emadhora mukati mevashandi vezvikepe vanoomeserwa zvakanyanya kumari yavo yekudaidza emergency - kunyangwe kana ichiunzwa kwavari nenyanzvi dzezvekurapa vane ruzivo. .
Anotevera mumutsara weavo vanopomera vatungamiriri veairport avo vane hanya zvakanyanya nekurembera pamatanho pane kudyara mari yekuvandudza masisitimu eHVAC, kutsiva fenicha nezvigadzirwa nemishonga inorwisa utachiona kana kuunza marobhoti uye tekinoroji nyowani yekuwedzera mashandiro asingabatike.
Kupomera ndivo zvakare vatungamiriri vendege. Ivo vanowanzo sarudza kuviga manhamba eCOVID kuseri kwemabhurocha akajeka uye mavhidhiyo anodhura pane kukwidziridza masisitimu eHVAC, kutsiva machira uye zvigadzikiso nemishonga inorwisa mabhakitiriya, kana kuwedzera marobhoti kune yavo yevashandi rondedzero.
Vanomhanya vari pamwe nevatungamiriri ava vatungamiriri vezvekushanya vanogara mu "yero yepasi pegungwa" sezvo ivo vangangoita saveve kana zvakare myopic kuti vazive chirwere ichi sezvo chaiyambuka miganhu yavo, mabheji avo, masuo, nematara, vachipinda munyika dzavo nekurwisa avo shamwari, mhuri, uye vashanyi. Vanowira mumachakwi aya vashanyi avo vakapofomadzwa zvisingaite neagos uye narcissism kuti vaone kuti dzimwe nguva zvishuwo nezvido zvinononoka kubatsira vamwe uye zvino inogona kunge isiri nguva yakanakisa yekujoinha rally yemudhudhudhu kana kufara pachikwata chemitambo nemazana nezviuru zvevafambi vane mafungiro akafanana.
Miniti yega yega ezuva rega rega, nyanzvi dzepa terevhizheni dzine hunyanzvi hwekutarisana nemakamera uye dzinoudza mamirioni evatariri kuti kunyangwe paine yambiro dzakanyanya, inguva yekufamba kupfuura kuchengetedzeka kunopokana kwenzvimbo yedu uye kuenda kunzvimbo dzinoenda nekukura kwehutachiona hweCVV-19 . Vanodyira vanoda kuti tishanyire maresitorendi avo zvisinei nemamiriro ehutachiona. Meseji inotikurudzira kutora makadhi echikwereti, vana, mhuri, uye shamwari uye tinoshandisa maawa anotevera tichidya nekunwa munzvimbo (s) dzinogona kunge dzisina mamiriro-e-e-e-ehurongwa HVAC masisitimu kana vaxxed uye vakafukidza vashandi.
Tourism indasitiri leaderhip haasati abvuma kuti zviitiko zvekushanya, kunyanya kufamba, imotokari dzekuparadzira chirwere; iyo indasitiri inofanirwa kuve pamberi pechirwere chekudzivirira - dhizaini nekushandisa zvirevo zvehutano nekuchengetedza, masisitimu, uye maitiro. Vakuru vehurumende vane chekuita nekushanya vanofanirwa kuratidza pachena mabasa avo uye zvavanobata, sezvo vari iwo hukama pakati pehosha nedunhu ravo, vachivaisa munzvimbo yekudzivirira kana kutorambidza kufamba senzira yekugadzirisa njodzi dzinokonzerwa nekutapukirwa kwehutachiona.
COVID-19 yakagadzira nharaunda yekushanya yekusagadzikana isingazoparadze. Kunyangwe kana COVID-19 isisiri tyisidziro, mavairasi matsva uye zvimwe zvirwere zvinowana nzira yekupinda mupasi redu, uye zvekare indasitiri ichatarisana nekusaziva (kureva, nguva yematambudziko, marongero ekutsigira kubva kuhurumende, vashanyi hunhu).
Mameseji ehurumende anopotsa
Tsvagiridzo inoratidza kuti mvumo-yakapihwa mari nehurumende yeCOVID-19 meseji haisi kushanda (zvinonyanya kuvhiringidza pane kudzidzisa). Iwo mameseji akavhiringidzwa nekuti haasi kusvika kune yakanangwa misika uye haasi kupa kuenderana ruzivo rwunobatsira uye runoshanda.
Mahotera, mafambiro, uye vatungamiriri vezvekushanya vari kubatikana kugadzira mavhidhiyo ane mavara nevashandi vekufamba nendege nemahweta pane skateboards; zvisinei, aya mameseji haasi kusvika kumisika yakanangwa. Sei? Nekuti mune iyo indasitiri yekushanya, ivo havasi kutaura kune vekutanga vafambi-vanoita sarudzo, vakadzi, uye vasingabvume kutya kwavo kwekufamba panguva yeCOVID-19.
New York ndizvo inoda chitupa chekubatira COVID-19s yezvinhu zvese zvine chekuita nekufamba.
Kana zvasvika pakuchengetedza nekuchengetedza nyaya, vakadzi vanonyanya kuda kupfuura varume maererano nezviyero zvekuchengetedza zvavanoda panzvimbo kana vachizonzwa "vakachengeteka" pavanenge vachifamba.
Maprotocol avanotsvaga anosanganisira hutsanana, kushandiswa kwemishonga inouraya utachiona, kuvapo kwehutano neruzivo rwekutariswa nevanozivikanwa nezvevashandi vezvehutano (kureva, vanachiremba, manesi, varapi vezvematongerwo enyika), zvitupa zvepamutemo zvinoratidzwa nenzvimbo dzinovimbika (kureva, zvipatara, zvikoro zvekurapa) , uye sarudzo dzehutano dzinoenderana nesainzi data uye kwete pazvikurudziro zvemari.
Vakadzi vanotarisira kuti mahotera achapa kuchenesa kwakadzika uye yakawanda yevashandi yekugeza maoko. Vashanyi nevashandi vanofanirwa kuvhara, nzvimbo dzeveruzhinji dzinofanira kucheneswa uye kuiswa mishonga inouraya utachiona pachirongwa chakaburitswa uye inosanganisira nzvimbo dzakajairika, nzvimbo dzekubata (kureva.
Makamuri emitambo anofanirwa kunge ari panzvimbo (ma) ekuti muve nehutachiona pamwe nemaelevator nema escalator. Mu-mukamuri zvigadzirwa zvakadai seTV remotes, switch switch, uye thermostats inofanirwa kuve chikamu chemitemo. Kubhadhara kwezvese masevhisi kunofanirwa kunge kuri kwemagetsi, uye doro-rakavakirwa nemaoko sanitizers anowanikwa pane yega gorosi pamusuwo wehotera nenzvimbo dzekudya / chinwiwa. Buffets inofanirwa kubviswa kana kugadziriswazve kuti ishandiswe.
Vakadzi vanoda kufamba uye vane mari yekushandisa. Chiitiko chekufamba chinopa kupukunyuka kubva kunzira dzezuva nezuva uchipa mikana yekubatana munharaunda uye mafaro ehedonic. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti vakadzi vakaderedza nguva yavo yekufamba uye kutsvagisa (Brooks naSaad, 2020) vakaona kuti 60% yevakadzi vemuUS vagari vari kutya uye kunetseka nezve kutapukirwa neCOVID-19. Chimwe chidzidzo chakawana kuti kutya, kunyangadza, uye dzimwe nguva kutsamwa kwakave pachena mhinduro dzemanzwiro dzine chekuita nekuchengetedza kwavo panyama panguva yeCOVID-19. Vafambi vechikadzi vanoona njodzi dzehutano kubva kuhutachiona, vachivasundira mukuora mwoyo uko nekufamba kwenguva kunoshanduka kuve kutya. Kamwe kutya kwehunofungidzirwa hutachiona hwehutachiona kubva kuhutachiona hwunove hunonyanya kushushikana, vanowanzo dzivirira mamwe maitiro sekufamba.
Kuti kudzikise kutya kwavo kufamba, indasitiri inofanirwa kupedza nzira yayo yesilo iyo inokamura indasitiri uye inogadzira mameseji akasanganiswa. Nekushanda pamwe chete, iyo indasitiri inogona kupa kubatana pakati pezvikamu zvese zvichiita kuti ruzivo rwekufamba rwusatyise. Kufamba kuenda / kubva kwainoenda kunofanirwa kunge kusinganetsi, kubva pasi kutakurwa kuenda kune epamba uye epasi rose kubhururuka, pekugara, uye kudya nemitemo yakamisikidzwa inonyatso kuoneka parwendo rwese.
Masangano eruzhinji neakazvimiririra ane basa rekushanyirwa anofanirwa kunge achigovana pachena zviono zvavo uye kurudziro yavo nemisangano isina kudzivirirwa uye isina kurongedzwa nevanoona nezvehukama neruzhinji. Vezvenhau nevatengi vanofanirwa kuziva nekunzwisisa mafungire esarudzo dziri kuitirwa kufamba (kana kwete); kuvhura miganhu (kana kwete); kumisikidza chengetedzo, utsanana, uye chengetedzo protocols (kana kwete); uye kana paine misiyano, zvikonzero zvekusiyana.
Vese vatungamiriri veveruzhinji uye vakazvimirira nevatengi vanofanirwa kutora chikamu mukugadzirwa, kuitwa, uye kushandiswa kwezvigadzirwa zvitsva zvehutano, masisitimu, uye maitiro nezvikamu zvakabatanidzwa zvakamira uye zvakatwasuka. Hutungamiri hunofanira kubva muindasitiri, zvichibva pakukwanisa kwete pahukama hwehurumende kana pesvedzero yemunhu, kana hupfumi.
Kuti kuderedze kutya uye kudzikamisa njodzi dzinosangana neECVID yekufamba, iyo indasitiri inofanirwa:
1. Taura nemikana yese inozivikanwa yekupararira kwehutachiona (hutano kuongororwa kwevaenzi nevashandi mazuva ese).
2. Inoda humbowo hwekubaiwa kwevaenzi usati wagamuchira kuchengetedzwa uye kunyoreswa.
3. Simbisai kutenderera kwenzanga munzvimbo dzese nekwamunogara.
4. Isa zvipingaidzo zvepanyama pakati pevafambi, vashanyi, nevashandi.
5. Kurambidza kuwandisa kwevanhu panhandare dzendege, ndege, zvinokwezva, zviitiko, maresitorendi, uye mahotera.
Iyo itsva yakasarudzika ichave chienzanisiro chiito pakati pekuchengetedza chiitiko chinogutsa kune vashanyi uye kutevedzera matanho akasimba anotorwa nevakuru pamusoro pekuchengetedza uye hutsanana protocols.
Pfungwa dzangu dzafunga
Kana yambiro dzese uye "ko dai" zvisina kugutsa… kudzosa kufamba, iyo mibvunzo inoda mhinduro usati wapa makadhi echikwereti kune vamiriri vanofamba inosanganisira:
1. Ndeupi muyero weCOVID-19 wakapararira kunzvimbo yekuenda? Huwandu hwehutachiona uye / kana kufa kumusoro kana pasi?
2. Ndeupi mwero weECVID-19 wakapararira munharaunda menyu?
3. Iwe unozokwanisa here kure neako (neinenge matanhatu tsoka) kubva kuvanhu vauri kufamba navo?
4. Shamwari dzako dzekufambisa / mhuri iri panjodzi huru yeCOBVIDI-19?
5. Unogara nemunhu ane njodzi here COVID-19 munhu?
6. Nyika kana hurumende yemunharaunda maunogara uye / kana kwaunoenda zvinoda kuti ugare uri wega kwemazuva gumi nemana mushure mekufamba?
7. Kana ukarwara neCOVID-19, uchafanirwa kupotsa basa kana zvimwe zvisungo?
8. Kana iwe ukarwara uchifamba, ndezvipi zvirevo zvinodiwa nevemunharaunda (s) uye chii chiri chinzvimbo chehutano (zvipatara, vanachiremba, mishonga) kwairi kuenda? Inishuwarenzi yako ichavhara izvi zvinodhura here?
Kana yako yekufamba nzira iri mota, pre-rwendo kuronga kunoda kuchenesa uye kwakazara kuchenesa uye kuisa utachiona mumotokari. Nzvimbo yega yega inofanira kupukutwa pasi (mahwindo, mabhandi epachigaro uye mabhureki, vhiri rekufambisa, mabato emusuwo, zvinodzora, pasi, nezvimwewo). Mukuwedzera kune zvekudya uye mvura, iva nezvigadzirwa zvekusimudzira zvema antibacterial wipes uye nemaoko sanitizers. Kana munhu wese apinda mumotokari, chengeta mahwindo akavhurika pazvinogoneka. Kana izvi zvisingaitwe, shandisa iyo A / C uye isa mweya mweya kune isiri-yekudzokorora modhiyo.
Deredza huwandu hwevanhu vanofamba mumotokari imwechete uye gadzirira kuti munhu wese apfeke chifukidziro (pazviri, kwete sedhiraini rechinhi). Kumira nekuda kwegesi kana zvekudya? Sarudza mumhanyi wegesi uye / kana tudyo - mumwe munhu asiri panjodzi huru. Ivo "vamhanyi" vanofanirwa kuve vakafukidzwa zvachose uye vane maoko akachena / akacheneswa vasati vadzokera mumotokari.
Ndira 21, 2021, mutemo wakamisikidzwa nehurumende yemubatanidzwa wakaratidza kuti "kutyora mutemo wezvematongerwo enyika KUSAPfeka masiki pakufambisa kwevanhu (CDC Guidelines). Ndege dzese dzekutengesa dzinoda kuti vafambi vapfeke kumeso (kusanganisira vana vane makore maviri zvichikwira). ”
Usavimbe nemunhu! Iwe hauna zano kuti ndiani akagara pedyo newe, pamberi pako, uye mitsara mitatu kumashure kwako - saka MASK UP! Mukuwedzera, chengeta maoko akachena uye dzivisa kubata nzvimbo, kumeso kwako, uye zvimwe zvikamu zvemuviri wako.
Nevezvenhau uye vezvehutano vanorumbidza zviitiko zvekunze, kupinda kwepaki kuri kuwedzera. Kana iwe ukafunga kusainira kurapwa kwemasango, tarisa mapaki ari padyo nekumba (anoonekwa seasina njodzi) uye bata maneja wepaki kuti uone kana nzvimbo iyi irikusangana nemitemo yeCOVID ine zvivakwa zvakashama uye zvakachena zvimbuzi (kusanganisira mvura yemupombi, pepa remuchimbuzi, sipo, uye matauro emaoko anoraswa). Ko nzvimbo dzekutamba dzakavhurika nekusangana neCDC nhungamiro yedaro uye hutsanana? Kana iyo paki inopa madziva ekushambira, anopisa matabhu, kana dzimwe nzvimbo dzemvura-dzakavakirwa, ndeapi masisitimu ari kushandiswa kuchengetedza vaenzi vakachengeteka uye COVID-19 yemahara?
Kana iwe uye / kana vamwe vako vekufamba uchirwara, waedzwa uine hutano kana uchangobva kuburitswa neCOVID-19 - USAENDE, uye zvisinei nehutano, usamboenda paki yakazara vanhu.
Mahotera / BnBs
Usati wagovana ruzivo rwekadhi rechikwereti kuti uchengetedze imba, ongorora iyo hotera kana chirongwa chekuchenesa chivakwa (zvigadzirwa zvinoshandiswa, kuwanda kwekuchenesa, kana vashandi vakavharwa uye vakavezwa, pachave nemaawa makumi maviri nemana enzvimbo isina chinhu mushure mekunge mumwe muenzi abva, uye iwe unotora nzvimbo?).
Zvichida zvakanakisa kuchenesa nzvimbo yako wega (kungova nechokwadi). Uya neako ako aunofarira ekuchenesa zvekushandisa uye sanitize iyo nzvimbo usati iwe neshamwari / mhuri vagare munzvimbo (s).
Kana iwe uri munhu anotora njodzi uye uchironga kufamba usingawane chirongwa chekudzivirira, tora hutachiona hutachiona mazuva matatu usati waenda. Pfeka chifukidzo pane zvese zvifambiso zvevoruzhinji nenzvimbo dzemukati (kusanganisira nhandare dzendege nezviteshi zvechitima). Dzivisa mapoka uye ugare anosvika matanhatu tsoka kure - kubva panenge munhu wese. Geza nekuchenesa maoko ako kazhinji nemaoko-sanitizer ayo angangoita 1 muzana doro. Kuedzwa kunofanirwa kudzokororwa mazuva 3-6 mushure mekufamba uye gadzirira kugara pamba uye kuzvimiririra wega kwemazuva manomwe mushure mekufamba… kunyangwe iwe ukayedza usina. Kana iwe ukaratidza kuti une hutachiona, zviparadzanise wega kuchengetedza vamwe. Hauna kugadzirira kuyedzwazve? Ingo gara kumba uri wega kwemazuva gumi-mushure mekudzoka kubva parwendo.
Ruzivo rwekufambisa rwakagadziridzwa, sosi yakanaka ndeiyi: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/COVID-19-Country-Specific-Information.html
© Dr. Elinor Garely. Ichi chinyorwa chekodzero, kusanganisira mapikicha chaiwo, haigone kuburitswa pasina mvumo yakanyorwa kubva kumunyori.
Nyamavhuvhu 23, 2021 pa10: 52
Kana iyi mirau uye zvikumbiro zvaiteerwa, nyika inogona kunge iri nani.